ကြက်တောင်ပံအစာသွပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ကြက်တောင်ပံအစာသွပ်	34
Posted by ムラカミ on Nov 29, 2014 in Arts & Humanities, Interviews & Profiles, Literature/Books | 34 comments
တကယ်တော့လည်း အချစ်ဆိုတာ အိုကယာမ က ကြက်တောင်ပံ အစာသွပ်လိုပဲဗျ…
ဘာထည့်ထားမှန်းမသိ ဘယ်သူထည့်ထားမှန်းမသိ …
စားကောင်းတာ တခု နဲ့ပဲ ကျေနပ်ရတာပဲရယ်…
နင်က ငါ့ မွေးရာပါ အူကြောင်ကြောင် ဘာသာရပ်ရယ်
နင်ငါ့နဲ့ သဘောမတူတဲ့ နင့် ညီမချော က ကလေးတယောက်တောင် ရသွားဘီ…
အဲ့ထိ … ကျုပ်ကို လှည့်ဖျားထားတုန်း.. ခုမှသိရဒယ်
ပြောပါတယ်… ကြက်တောင်ပံထဲ ဘာမှန်းမသိတာတွေ ထည့်ထားသလို ဆိုတာ…
ခုထိ အူလည်လည်နဲ့ ရယ်…
စာပြန်ဖတ်တိုင်းလည်း ခနခန သတိရပါရဲ့…
မသုံးဖြစ်တဲ့ ပညာရပ်တခု သင်ပေးဖူးတဲ့ ကျေးဇူးတော့ရှိရဲ့…
ငါလည်း နင့်ကို တခု ပြန်သင်ပေးဖူးတယ်..
ဒင်းလား …အင်း …
တခါတရံတော့လည်း စီးကရက် တောင်းသောက်လေရဲ့
တခါတခါတော့လည်း စီးကရက် မီးခိုးမွှန်လို့ သေမလို ဖြစ်ဖူးရဲ့
စိတ်ခင်းလက်သာရှိတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းပီး လိုက်ပို့ပေးပေမယ့်
စိတ်မကြည်တဲ့အခါ တခုတ်တရ ဖုန်းဆက်ပြီးတောင် သမသေးတာရယ်..
ပြောပါတယ် အူကြောင်ကြောင် ဆပ်ပဂျက်ပါဆို…
တခါတလေများ မူးမူးနဲ့ ရေးချင်ရာရေးသွားတာ ..လက်ဖ၀ါးတင်မက … လက်ဖျံတခုလုံး ပွထလို့…
အဲလို လုပ်ချင်ရာ လုပ်ပြီးရင် စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ….
တကယ်တော့ …ကျပ်မပြည့်တဲ့ ကလေး မို့ … မိဘတွေက အလိုလိုက်ထားသလိုမျိုးပါပဲ …
အေးလေ… ငါတို့ မိဘတွေ က ငဒို့ကို အဲ့လို မှတ်ထားတာရယ်…
မထော်မနန်းတွေ … သူတို့ဟာ သူတို့တော့ ဖုန်းဆက် ရယ်ကြလေမလိမ့်ပေါ့…
ငါ့ကို အဲ့နာမည်ခေါ်တာ နင်တယောက်ပဲ ရှိတာရယ်….
P.S နင်မုန်းတဲ့ ကရင်မလေး နဲ့ နက်ဖြန်တွေ့မယ် … ဒချိ ဒချိ…
ခင်ဇော် says: ကရင်မ မြင်တိုင်းးး
ကြံစည်ချင် တဲ့ မောင် ရ ထားးးတာ
သာမီးး ခေါင်းးးကျိန်းးး တယ် ဒက်ဒီ
ကန္နားစီး မိဂီ says: ကရင်မတွေ စိတ်နာလွန်းလို့ပါဗျာ …
တကယ်တော့ မိဘစကားနားထောင်ပီး ပြန်မလာခဲ့ရမှာ…
Mr. MarGa says: ငင်
surmi says: အချစ်ဆိုတာ တီကောင်လိုဘဲမောင်ဂီရဲ့
နှစ်ကောင်ဖြစ်သွားရော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: နင်က ငါ့ မွေးရာပါ အူကြောင်ကြောင် ဘာသာရပ်ရယ် —- အဲ့တစ်ဂျောင်းက ဘာဒုံးဟ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျန်တာတော့ ကျောက်စ် ဉာဏ်မမီ…
ကြက်တောင်ပံအစာသွပ်ကတော့ ခင်ဇော်ထမင်းဆိုင်ကို ပေးဖို့ ရေးထားပြီးကြောင်း…
အင်း… အခြစ်ရယ်… ချစ်ကြည်ရေးရယ်… အဟိ မပြောတော့ပါဘူး
ကန္နားစီး မိဂီ says: မွန်​ဟာ မွန်​ပဲယူသင့်​ပါတယ်​​လေ တကယ်​​တော့
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဒါဆို ဖွေးဖွေးကို ကျနော်ချစ်တဲ့အချစ်ကလည်း
Iris says: အချစ်​က ကြက်​​တောင်​ပံဖြစ်​နိုင်​​ပေမဲ့ ဘ၀က ကြက်​​တောင်​ပံမဟုတ်​ဘူး ဆြာ။
ကိုယ်​ထည့်​ထားတာ​တွေ သိရမယ်​ဖြစ်​သလို အရသာကိုလည်း ခန့်​မှန်းလို့ရတယ်​ ဆြာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: ..အကြည်…ခင်ဗျားကဘာသိလို့လဲဗျ…အချစ်ရေးတို့ ကြက်တောင်ပံအစာသွပ်တို့ဆိုတာက
..ကချင်တွေ မွန်တွေ မှ ကျွမ်းကျင်တာ…အဟိဟိဟိ ..ဘာမှလဲမသိဘူး..
ကန္နားစီး မိဂီ says: ဟိတ်​လူက​ဆောရိုး ခညားအမ်​ပီတီဖုန်းပိတ်​ထားတာယား
sorrow says: . ပိတ်ရပါဘူး ဆြာလေးရယ်…ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ..
Was this answer helpful?LikeDislike 660
Iris says: ဟုတ်​ကဲ့ဆြာ​စောရိုး…မီး ကက်​ပတိန်​နဲ့သင်း​ဘောကို အပိုင်​စီးချင်​ပါတယ်​။ သင်​​ပေးပါ​နော့်​…။ ဟန်းနီးမွန်းကန်​ဘာတစ်​ပတ်​ပို့​ပေးမယ်​။
ကန္နားစီး မိဂီ says: ကျုပ်​ကိုဆြာလုပ်​ချင်​ အရင်​စွံ​အောင်​ကြိုးစားပါ​လေ
အာစီယံရပ်​ဝန်းမှ အသည်းမမာဆုံး​သော မာကတ္တာ
Iris says: Liam နဲ့တူတဲ့ ကန်​ကရူး​လေးရယ်​. ကက်​ပီတယ်​စီးတီးထဲမုတ်​ဆိတ်​ဖွားဖွား လို စုတ်​ဖွားဖွား အန်​ကယ်​ဆန်​ သား​လေးရယ်​။ ကက်​ပတိန်​ဖီးလစ်​ရယ်​။ :'(
ကန္နားစီး မိဂီ says: ချဉ်​ထှာ​အေ
ခင်ဇော် says: တခြားးးတွေ လျောက် မစဉ်းးစားးးနဲ့လေ ဂီလေးးးး
မမ စပွန်စာပေးးးမို့ ရှာနေတယ်။
~~~~~~ငါ ဒီမှာ မင်းးးနဲ့ နီးးးဖို့ ကြိုးးးစားးးနေတယ်~~~~~~~
ကန္နားစီး မိဂီ says: ယက်​စ့်​
အိုင်​အမ်​ယွာ ပလိုက်​ဘိတ်​ ဘလက်​ရိန်းက​လောက်​
Crystalline says: ချဉ်​ထှာ.. အရည်​မရအဖတ်​မရ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကန္နားစီး မိဂီ says: ​အေး​ဆေး​နေ အလဖွားယီး
မြစပဲရိုး says: ကြက်တောင်ပံ အရိုး ကို ဘယ်သူက ဘယ်လိုထုတ် ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုရော စိတ်မဝင်စားဘူးလား။
ဒီတော့ အချစ်ဖြစ်ဖို့ အရိုး ခမျာ ဖယ်ထုတ်ခံရ။
ဒီတော့ အဲ့ ကြက်တောင်ပံ က အရိုးကြိုက်သူ များ နဲ့ တော့ မကိုက်။
ကန္နားစီး မိဂီ says: အူး​လေးကိုသနားတယ်​
ယူဇာရှားလို့ ငဒို့ဂျီး​တော်​လုဂွဇာနဲ့ ပထန်းဆက်​ပါရှာတယ်​
မြစပဲရိုး says: ဟယ် ဂလိုလား။
အဟွန့် အဟွန့် lol:-))))
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပို့စ်တစ်ပုဒ်လုံး ဘာရေးထားမှန်း နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြက်တောင်ပံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြားဖူးထားတာရှိတယ်။ မြန်မာပြည်ကြက်တောင်ပံကို ပြောတာ။ ကြက်ကို အသားတိုးဆေးထိုးတဲ့အခါ တောင်ပံထဲကို ထိုးရတာတဲ့။ အသားဆေးထိုးပြီးရင် သတ်မှတ်ချက်ရက်အတွင်း ကြက်ကို သတ်မစားရဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ ကြက်ကို အသားတိုးဆေးထိုးထားပြီး သတ်မှတ်ရက်မတိုင်ခင် သတ်ပြီး ဈေးကွက်ပို့တာတွေရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ မြန်မာမလေးတွေ ၄ယောက်မှာ တစ်ယောက်နှုန်း သားအိမ်ထဲမှာ အလုံးတွေ ဖြစ်ကြသတဲ့။ ကြားဖူးတာ ပြန်ပြောတာပါ။
ကန္နားစီး မိဂီ says: သိဖူးဗျ
kai says: ကီး… အမြင့်လွန်ပြီး.. ဘာတွေမှန်းမသိ..
အော်..အင်း..မားကက်တင်းပရိုများ..၇ယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကန္နားစီး မိဂီ says: ကျော် မှ ပေါက်ကရ မရေးရင် ရေးမယ့်လူ မရှိမှာစိုးလို့ ချေဒနာ နဲ့ ပါ သဂျီးရယ်….
နက်ဖြန် ဒိတ် ခည …
ကိုဘေးယ သွားမယ် စိတ်ကူးတယ် ..
မွသဲ ( 17082011 ) says: ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပီးနင်တင်တယ်ဆိုကတဲကတော့ ဟင်းချက်နည်းမဟုတ်မှန်းသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ဟုတ်လိုဟုတ်ညားဆိုပီးဖွင့်ကျိမိဒါ နာ့အမှား
Lay Pai says: ကြက် တောင်ပံ အစာသွပ် တကယ် လုပ်စားချင်လို့ ၀င်ဖတ်တာ ဘာတွေမှန်းလည်း မသိ။
kyeemite says: .နားမလည်ဘု..မရိုစီရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -ကျွားချင်ရုံ သက်သက်ပို့စ်တင်ချင်းဖစ်ကျောင်း နားလယ်ဘာသီ…
-တကယ်မဟုတ်ဘဲ မကျွားတတ်ဝူး..ဟူသော စကားလုံးဖြင့်..၂ထပ်ကွမ်းး ပျံကျွားမီ ဖစ်ကျောင်း ကျိုသိနေပါသီ… :P
ကန္နားစီး မိဂီ says: စော်ကြည်တာဟာ အပြစ်လားကွယ်….
ခင်ဇော် says: ဆော်ကြည်တာ အပြစ်မဟုတ်။
စပွန်ဆာ ရှာတာ အပြစ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြက်တောင်ဗံဆား ကွင်သဗုံမ မသိဈေဏဲ့…